Muxuu Ahaa Dardaarankii Cajiibka Ahaa Ee Paul Pogba Uu Siiyey Ciyaartoyda Manchester United | Laacibnet.net
Muxuu Ahaa Dardaarankii Cajiibka Ahaa Ee Paul Pogba Uu Siiyey Ciyaartoyda Manchester United
Paul Pogba ayaa u diray Manchester United kaalinta ugu sarraysa horyaalka Premier League, iyagoo hoggaanka qabtay horyaalka, laakiin waxay u safrayaan Anfield oo ay kula soo ciyaari doonaan Liverpool maalinta Axadda ah ee toddobaadka soo socda.
Kubbad fooli ahayd oo uu daqiiqaddii 71aad u dhaliyey Paul Pogb ayaaa Manchester United siisay inay saddexda dhibcood kaga soo qaadato Burnley oo ay ugua tagtay Turf Moor, waxaanay saddexdaas dhibcood ka horreeyaan Liverpool oo haysata 33 dhibcood halka Man United ay leedahay 36 dhibcood.
Xiddiga guusha ku hoggaamiyey Manchester United ee Paul Pogba ayaa ciyaartoyd kooxda dardaaran siiyey markii ay soo dhamaatay ciyaartu, balse dhinaca kalena waxa uu dood ka keenay gool uu qaybta hore dhaliyey Harry Maguire oo laga diiday.
Pogba oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Dareenkaygu muu ahayn inuu gool yahay oo kale, laakiin waxa hubaal ah inuu goolkaasi sax ahaa.
“Isaga ayaa horbooday, kubadda madaxeeyey waxaanay ahayd gool, laakiin garsooraha ayaa go’aamiyey (in aanu gool ahayn), waxaanu ahaa go’aan layaab leh.”
Ole Gunnar Solskjaer ayaa isaguna ku waafaqay Pogba hadalkaas, waxaanu tababaraha reer Norway yidhi: “Hubaashii Harry wax qalad ah muu samaynin. Umana malaynayo inuu xataa u dhowaa qalad.”
Manchester United nasiibka ayaa la baxsaday xalay, waxaanay ku dhowaatay in Luke Shaw laga saaro qaybta hore ee ciyaarta kaddib markii uu qalad ku galay Joey Gudmunsson balse VAR oo looga soo daawaday kaliya lagu siiyey kaadh digniin ah.
Paul Pogba ayaa qolka lebbiska ka ahaa xubin muhiim ah oo ciyaartoyda kusoo kordhiyey khibrad guuleed maadaama uu yahay laacib horyaallo badan kusoo guuleystay, marka la barbar-dhigo ciyaartoyda kale ee kooxda.
Solskjaer ayaa ku amaanay Pogba saamaynta uu ku leeyahay qolka lebbiska iyo sida ay ugu jirto maskax guuleed.
Ok hada aman bu mudan yahay Pogba markii hore halagado hana dhaafo unetid Pogba lantisa masoconkarto marna hala amano marna hala cayo